Global Voices teny Malagasy » Niteraka fahatezerana tao Meksika ny namonoana mpianatra telo ho mpanatontosa sarimihetsika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Avrily 2018 11:16 GMT 1	 · Mpanoratra J. Tadeo Nandika (fr) i Stacy B., Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
Saripika nandritra ny diaben'ny 24 avrily 2018 tao an-tanànan'i Mexico ary nozaraina  teo amin'ny horirantava Twitter an'ilay mpikatroka Emilio Álvarez Icaza.
Naneho ny ratrany, ny loniloniny ary ny fahatafintohinany ireo mpisera ny media sosialy (indrindra fa ireo mpaneho hevitra amin'ny alalan'ny Twitter) ao Meksika taorian'ny filazana  natao tamin'ny 23 avrily 2018 momba ireo mpianatra mpanatontosa sarimihetsika miisa telo nanjavona tamin'ny volana marsa. Ny nolazain'ny  manampahefana ao an-toerana dia hoe novonoin'ny andian-jiolahy ireo tanora ireo ary dia nolevoniny ny vatany mba hampanjavonana ny porofo.
Tamin'ny 20 marsa 2018, nambaran'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Oniversiten’ ny Haino Aman-Jery (CAAV), izay manana foibe iray ao Guadalajara (Fanjakan'i Jalisco ) ao andrefan'i Meksika ampahibemaso ny fanjavonan'i Salomón Aceves, Marco Ávalos ary i Daniel Díaz, mpanatontosa sarimihetsika eo am-piofanana, ary mianatra ao amin'ny oniversite voatonona. Nilaza ny fizotran'ny raharaha  i Zorayda Gallegos, mpanao gazety amin'ny fampitam-baovao maro, ka anisan'izany ny gazety espaniola El País :
Araka ny fizotran-tantara  navoakan'ny gazety meksikana Milenio, nisy vondron'« olona mitam-piadiana » nanatona ireo mpianatra sy ireo hafa amin'ny namany avy teo akaikin'ny fokontany Colinas de Tonalá (nihazonana ireo mpianatra) tamin'ny filazàna ny tenan-dry zareo ho mpikambana amin'ny vondrona polisy iray. Araka ny loharanom-baovao hafa , satria noheverin'ireo olona ireo ho mpikambana amin'ny fikambanan-jiolahy mpamono olona hafa miady ny fifehezana ny faritra izy ireo no nahatonga izany.
Avy eo (araka ny fitantaran'i Milenio), nentina tao amin'ny trano iray ireo tanora ireo. Tao ny iray tamin-dry zareo, Salomón Aceves, no maty noho ny fampijaliana. Novonoina ihany koa avy eo ny namany, avy eo nentina tamin'ny toerana iray hafa, araka ny nolazain'ny manampahefana , nolevonina tao anaty asidra solforika  ny nofon-dry zareo.
Moramora kokoa ny mahatakatra ny siokan'i Vianey raha tsaroana ny raharaha fakana an-keriny ny mpianatra miisa 43 tao Iguala (Fanjakan'i Guerrero) tamin'ny septambra 2014 (Raharaha Ayotzinapa ).
Nanao izao fanamarihana izao indray i Luis Antonio García, ka ao anatin'io izy te-hanondro ny amnistia tolo-kevitry ny kandidà ho filoham-pirenena mitarika amin'ny fitsapan-kevitra  ahafahana manaisotra tsikelikely ny herisetra efa manjaka loatra :
Tsy zava-baovao tsy akory ny fampiasana asidra sy singa shimika mahery hafa handevonana faty ao Meksika. Santiago Meza López , fantatra kokoa amin'ny anarana El Pozolero, no tsy isalasalana fa jiolahy malaza indrindra voaheloka ho nanao io karazam-pampijaliana io. Araka ny fanisana nataon'ny gazety , nandevona olona mihoatra ny telonjato fantatra anarana, novonoina tao anatin'ny ady an-trano [mifandraika amin'ny ady amin'ny mpanondrana zava-mahadomelina] nahadifotra an'i Meksika i El Pozolero.
Tanora an'arivony no nidina teny an-dalamben'i Mexico ny takarivan'ny 24 avrily ho fanoherana ny herisetra manjaka amin'ny firenena. Ao amin'ny Twitter, hita ao anatin'ny fironana  ny tenirohy #NoSomosTresSomosTodxs noho ny nampiasan'ny olom-pirenena meksikana azy hitakiana ny rariny sy ny filaminana amin'ny Fanjakana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/29/118737/
 ny fizotran'ny raharaha: https://elpais.com/internacional/2018/03/22/mexico/1521744565_067870.html
 loharanom-baovao hafa: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43879259
 araka ny nolazain'ny manampahefana: http://www.sinembargo.mx/23-04-2018/3411032
 asidra solforika: https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfurique
 Raharaha Ayotzinapa: https://es.globalvoices.org/2016/05/09/giei-ayotzinapa/
 amnistia tolo-kevitry ny kandidà ho filoham-pirenena mitarika amin'ny fitsapan-kevitra: https://es.globalvoices.org/2018/01/19/amlo-amnistia-como-solucion-al-conflicto-armado-interno-mexico/
 fanisana nataon'ny gazety: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140821_mexico_desaparecidos_pozolero_an
 no nidina teny an-dalamben'i : https://www.animalpolitico.com/2018/04/marchan-pruebas-justicia-estudiantes-cine/
 hita ao anatin'ny fironana: http://www.sinembargo.mx/24-04-2018/3411461